प्रतिनिधिसभामा रहेका राप्रपा नेपालका एकमात्र सांसद्‍ राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँ माग भएको एक योजनाका लागि १ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको भन्दै संसद्‍मा प्रश्न गरेका छन् । गाउँपालिकाको योजना छनोटमा प्राथमिकता क्रमको अन्तिममा रहेको सो योजनाको लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नै नभएको सांसद् लिङ्देनको भनाइ छ । संसद्‍मा एक्लो प्रतिनिधि भएको कारण आफु र आफ्नो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको लिङ्देनको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, सांसद्‍ लिङ्देनले प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनको अंशः
झापा जिल्लामा देशको धेरै बजेट गयो भन्ने खुब प्रचार चलिराखेको छ । तर, म त्यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँ, जहाँ केन्द्रीय तहबाट नयाँ कार्यक्रमको लागि एक रुपैयाँ पनि गएको छैनमात्र होइन, विगतका सरकारले सुरु गरेका बहुवर्षीय योजनाहरु रोक्ने काम भएको छ । कचनकवल गापा लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाहरु लथालिङ्ग छोडिँदा अहिले सामान्य आवागमनमा समेत असुविधा पुगेको छ । र, म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र यी योजनाहरु तत्काल सुचारु होस् ।
अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो सरकारले तराई मधेसमा विकास र समृद्धिका लागि ठुल्ठुला कामहरु चलाईराखेको छ । मधेसलाई अहिले विशेष ढंगले हेरिराखेको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र त्यसमध्येको यौटा कार्यक्रम तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कचनकवल गाउँपालिकामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिलिङ पठायो । कार्यक्रम माग्यो । गाउँ परिषद्‍ले योजनाहरु कार्यक्रमहरु छनोट गरेर पठायो । मन्त्रालयले प्राथमिकताको अन्तिम सूचीमा रहेको कार्यक्रम जहाँ १० लाख माग गरिएको थियो तर १ करोड १० लाख पठायो । हामीले यस्तो किन भयो ? भनेर मन्त्रीजीलाई सोध्यौं र गाउँपालिकाले पनि आफ्नो निर्णय मन्त्रालयलाई स्मरण गरायो । मन्त्रीजीले हेर्छु भन्नुभयो । अहिलेसम्म हेर्नुभएन । किन हेर्नुभएनछ भनेर बुझ्दाखेरि कार्यकर्ताको सिफारिसको आधारमा योजना छनोट भएको रहेछ ।
म आजपनि यहाँ चुनौतीको साथ मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो खर्च गर्ने ठावै छैन । त्यस्तो योजना किन छनोट गरियो ?
मैले त यो संसद्‍मा संघीयतामा विमति राख्ने मान्छे ममात्रै छु होला भनेको संघीयतालाई खतम गर्न लाग्ने मन्त्री नै हुनुहुँदो रहेछ । अब संगत गर्नुपर्लाजस्तो लागेको छ । तर, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, संसद्‍मा एक्लो प्रतिनिधि भएको कारणले मेरो क्षेत्रको जनतालाई उपेक्षा गर्ने, क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने र दुःख दिने खालका कुनैपनि क्रियाकलाप सह्य हुनेछैन । र, मैले फेरिपनि भन्न चाहन्छु, अनशन बस्नुपर्छ सभामुख महोदय ?